နောင်တမရခဲ့ပါဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » နောင်တမရခဲ့ပါဘူး	22
Posted by A mar nyo on May 28, 2015 in Creative Writing, Short Story | 22 comments
ကျွန်မမျက်ဝန်းအိမ်မှ မျက်ရည်ပူများကို ကြည့်ရင်းသက်ပြင်းချကာ မောင်မျက်နှာလွဲသွားသည်။ ကျွန်မရင်ကို အစိတ်စိတ် ကွဲစေသော လုပ်ရပ်များအတွက် ဖွင့်ဟလိုက်သော စကားတစ်ခွန်းက ‘တောင်းပန်ပါတယ်’တဲ့လား။ ဒီစကားလေး တစ်ခွန်းအပြင် မပိုတော့။ လွန်ခဲ့သော လပေါင်းများစွာ ကျွန်မပေးဆပ်ခဲ့သော အချိန်များ၊ အချစ်များကို ဒီစကားတစ်ခွန်းနဲ့ ကြေဖျက်လိုက်ခြင်းလား။ ဖြစ်နိုင်လျင် ဒီနေရာ ဒီအချိန်ကို ရပ်တန့်၍ အဝေးဆုံးနေရာသို့သာ ထွက်ပြေးသွားချင်တော့သည်။ ကျွန်မထက်ချစ်ရမည့်သူ ပေါ်လာ၍ လမ်းခွဲကြပါစို့ ဆိုတဲ့စကားအတွက် ကျွန်မဘယ်လို ဖြေသိမ့်ရမလဲ။ အမှန်တကယ်ဆို ပေါက်ကွဲလိုက်ဖို့ တစ်ခုခု တုန့်ပြန်လိုက်ဖို့ကောင်းပေမဲ့ စကားစရှာမရ။ မောင့်ပုံစံတွေ ပြောင်းနေခဲ့တာ သတိထားခဲ့ပေမဲ့ ယုံကြည်စိတ်လွန်ကဲခဲ့သောကြောင့် အပြစ်မမြင်ခဲ့မိ။ ကျွန်မအပေါ် ရက်စက်လိမ့်မယ်လို့လည်း မထင်ခဲ့။ အခုတော့ မောင့်အပေါ်ကျွန်မထားခဲ့သော ယုံကြည်မှူကို တစ်စစီချိုးဖျက်ခြင်းသာမက ကျွန်မရဲ့အချစ်ကိုပါသစ္စာဖောက်သွားခဲ့ပြီရက်စက်သွားခဲ့သည်။ မယုံကြည်နိုင်သော မောင့်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် အိမ်မက်လား တစ်ကယ်လား ဝေခွဲမရကာ မျက်ရည်များသာ တွေတွေကျလာခဲ့သည်။ ကျွန်မခဏကြာ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီး မျက်ရည်များသုတ်၍
‘ကောင်းပြီမောင် လမ်းခွဲကြတာပေါ့’လို့ပြောလိုက်သည်။ ကျွန်မပြောသော စကားကိုနားထောင်ပြီး မောင့်မျက်နှာပေါ်တွင် အံသြရိပ်သန်းသွားသည်။
‘ဘာလဲမောင်မမျှော်လင့်တဲ့စကားကြားလိုက်လို့လား မကမောင့်ကိုငိုယိုပြီးတွယ်ကပ်နေမယ်ထင်ခဲ့တာလား ကိုယ့်ကိုမချစ်လို့ နောက်တစ်ယောက်ရှာသွားတဲ့ မောင့်ကိုမကဘာလို့တွယ်ကပ်နေရမှာလဲ။ တွယ်ကပ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး သစ္စာမရှိတဲ့မောင့်အကြောင်းကို စောမသိခဲ့ပေမဲ့ အခုလည်းနောက်မကျသေးပါဘူး လက်ထပ်ပြီးမှဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ့ခဲ့တာထက်စာရင်ပေါ့ အခုလည်းဘာမှလွန်လွန်ကျူးကျူးမဖြစ်ခဲ့တာ တော်သေးတာပေါ့’
ကျွန်မပြောသောစကားများကို မောင်တစ်ယောက် ငြိမ်သက်စွာ နားထောင်နေရင်း ခေါင်းငုံ့သွားသည်။ မောင့်ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်မထိုနေရာမှ ထလာခဲ့သည်။ အရင်နှစ်ယောက်တွဲ လျှောက်ခဲ့ဖူးသော လမ်းမထက် တစ်ယောက်တည်း လျှောက်လာခဲ့သည်။ မောင့်ကိုချစ်ခဲ့ပေမဲ့ ချစ်ခဲ့တာလေးတစ်ခု အတွက် တွယ်ကပ်နေရလောက် အောင်စဉ်းစားဥာဏ် မမဲ့ပါဘူး၊ အခုချိန် လမ်းခွဲရလို့ နာကြင်ရပေမဲ့ နှစ်တွေကြာရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အချိန်ကကုစားသွားမည်ဖြစ်သည်။ ချစ်ခဲ့ခြင်းအတွက် နောင်တမရခဲ့သလို လမ်းခွဲခြင်းအတွက်လည်း နောင်တမရပါ။
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့ဒီကျမက အဲ့ဒီအချိန်မှာ
.”ကျမလည်း ကျမကို ရှင့်ထက် ချစ်ပြနိုင်မဲ့ သစ္စာစောင့်သိတတ်သော
ယောကျာ်းတယောက်ယောက်နဲ့ ထပ်ဆုံစည်းခွင့် ရှိသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”လို့သာ ပြောလိုက်သင့် ထင့်
အဲ့လိုလူစားမျိုးနဲ့က ”လုပ်ရက်လေ မောင်ရယ် မောင့်အပေါါ် ချစ်ခဲ့မိသလောက် ပြန်မချစ်ခဲ့ပါလား ဟင် ဘယ့်နဲ့ညက်နဲ့”
.ပြောနေဖို့ မသင့် / သံယောဇဉ်စကားတွေနဲ့ မတန်သူမို့
မြစပဲရိုး says: ပါးရိုက်လိုက်မိရင်တောင် ကိုယ့်လက်ကိုယ်ကို ပြန်သနား နေရမှာ။
ဒီလို ထားခဲ့တာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
. ဒီလို လူ အတွက်တော့ ဘယ်လို မှ နောင်တ မရပါနဲ့။
ခင်ဇော် says: ဂလို ဆုံးးဖြတ်တာ ပဲ မှန်တယ်
အောင် မိုးသူ says: မောင်ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့။
Ma Ei says: မှန်တယ်…
hmee says: ကြိုးစားထား။ ကိုယ်​မ​ရေး ဖြစ်​လို့ ​ရေးနိုင်​သူကို အား​ပေးတာ။ စကားပြန်​လုပ်​ရင်း ကြုံ​တွေ့ ရတာ​တွေကိုလည်း ဗဟုသုတရ​အောင်​ ​ရေးဦး။
မြစပဲရိုး says: မှီ့ ညီမတော် လေးပေါ့။
လူလဲ စု ပေး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ ရွာထဲ ဝင် စာချ ပေး ပါဦးမှီ ရယ်။
မှီ့ စာလေးတွေ မဖတ်ရတာ ကြာပေါ့။ :-)))
hmee says: အရီး​ရေ မ​ရေးဖြစ်​တာ ကြာလို့ ထင်​တယ်​ ​ရေးရမှာ စိတ်​မရဲ သလို။ အဓိက က အခုတ​လော စာမဖတ်​ဖြစ်​တာလည်းပါမယ်​။ က​လေး​နှစ်​​ယောက်​လုံး ​ကျောင်းတက်​​တော့မှာမို့ စိတ်​​ရော လူပါ မအားတာလည်း တ​ကြောင်းမို့ အချိန်​မ​ပေးနိုင်​ဘူး ဖြစ်​​နေတယ်​။ သိပ်​မကြာ​တော့ဘူး အချိန်​​တွေအား အထီးကျန်​တယ်​ဆိုပြီး ရွာထဲ အချိန်​ပြည့်​ ပြန်​​ရောက်​ချိန်​ နီးလာပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11632
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စာအရေးကောင်းတဲ့ မအမာညိုရေ
မအမာညိုရဲ့ ဇာတ်ကောင် မောင် လို လူတစ်ယောက်က လမ်းခွဲသွားတဲ့
တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို သိပ်မကြာသေးခင်က မှ ကျနော်က အပြင်မှာကြားထားတော့
ဒီအထဲက ဇာတ်ကောင်မိန်းကလေးရဲ့ စိတ်ထားကို လေးစားမိတယ်။
“နောင်တ မရ ခဲ့ပါဘူး” ဆိုတဲ့အတွေးလေးကို ပိုနှစ်သက်မိတယ်။
ကျနော်သိလိုက်တဲ့ အပြင်ဘက်က တကယ့်အဖြစ်အပျက်က တော့ လမ်းခွဲချိန်မှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့သူမှာ နစ်နာမူ့များစွာနဲ့ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
A mar nyo says: အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးပေါက်ရေဆက်ပြီးရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်
Mike says: .ကျုပ်တောင် အတိတ်ကိုပြန်လွမ်းသွားမိတယ်…“ဘာမှလွန်လွန်ကျူးကျူးမဖြစ်ခဲ့တာအတွက်တောင်
​ဒေါ် လေး says: မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ
ဒီလိုစာမျိုး မိန်းကလေးတွေ ကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်
ခံစားရတဲ့ အခိုက်အတန့် မှာတော့ ကိုယ်လောက်ခံစားရသူ
ရှိမှာ မဟုတ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာ နဲ့အမျှ
ဟာသတခု လိုပြန်ပြောပြ နိုင်လာလိမ့်မယ်
Ma Ma says: မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတာကို သဘောကျတယ်။
padonmar says: အမာညို့ကိုတော့ အော်မေ့ဂိုဏ်းထဲ ဆွဲသွင်းရင် ကောင်းမလား ချိန်နေတယ်။
A mar nyo says: အော်မေ့ဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်ဖို့၉၀%သေချာနေပါပြီ
kai says: အမျိုးသမီးတွေ.. အဲလိုပြောတိုင်း.. ဟိုလူ..အဲ… အဲ.. အ၀ါဂိုဏ်းသားတွေကို.. လှိမ့်အမြင်ကပ်တော့တာပဲ..။
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမရှိယုံတင်မဟုတ်.. လူထုတ်စွမ်းအားလည်းမရှိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်ပါ့.. စောစောသိရတာ ကံကောင်းတယ်ပဲ မှတ်လိုက်ပါ..
“ဘာမှလွန်လွန်ကျူးကျူးမဖြစ်ခဲ့တာအတွက်တောင် မောင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်”
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျေးဇူးတင်သင့်တာလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
တောတွင်းပျော် says: ပျော် ..
အဲ ! ..မောင် ထပ်ပြီးတောင်းပန်ပါရစေ အမားရယ်
ဂိုဏ်းစုံတဲ့ဟောဒီဂဇက်ထဲချပြလိုက်တော့ 
တကိုယ်တည်း လူပျိုချောလေးလို့အထင်သေးခံရတဲ့ 
မောင့် ကို ခုတော့ရွာသားတွေ အထင်ကြီးကုန်ကြပြီ အမာညို _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
တဂျိန်ဂျိန်နဲ့ဒီရွာမှာ ဒီလိုစာမျိုး မဖတ်ရတာကြာပြီ
မျောက်ချောလေး .. တောတွင်းပျော်
A mar nyo says: ကြိုဆိုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
uncle gyi says: ဒီလိုစိတ်မျိုးဖြစ်နေရမှာ
A mar nyo says: အခုခေတ်ထဲမှာ သိပ်အလေးအနက်မထားတော့ဘူးလားလို့လူငယ်တွေက ဒီတစ်ယောက်ပြတ်ရင် နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာတွေများနေသလိုပဲ
kai says: အေးလေ.. အဲဒါအမှန်ပဲ…။
ဘ၀ဆိုတာတိုတိုလေး..။ အထူးသဖြင့်.. ငယ်ဘ၀ဆိုတာ.. တိုတို့တို..။
လုပ်ချင်တာတွေ.. လုပ်ချင်သလိုသာလုပ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.